Uhlobo olulandelayo lwe-Gnome 3.30 luzofika nokuthuthuka ku-Nautilus | Kusuka kuLinux
Uhlobo olulandelayo lweGnome 3.30 luzofika nokuthuthuka eNautilus
Njengoba abasebenzisi abaningi beGnome kufanele bazi Sisekude isikhathi esingaphezu kwenyanga ukusuka ukukhululwa ngokusemthethweni kwe inguqulo entsha yemvelo yedeskithophu yeGnome, abebezofeza ngayo ikhalenda labo lentuthuko elisungulwe.
Phakathi nale nqubo, kuhlongozwa izici ezintsha futhi zethulwe futhi inqubo efanayo ziyapholishwa ukuze zihlanganiswe ngokuphelele nemvelo futhi ngaleyo ndlela zinikeze indawo eyiyo yedeskithophu kubasebenzisi.
Esinye sezici ezintsha ezipholile okuvelile phakathi kwalo mjikelezo wentuthuko ukusekelwa kokwakhiwa kwemvelo ye-GNOME yokwakhiwa kwe-ARM64 (AArch64). Ngakho-ke, kungenzeka ukusebenzisa i-Hardware ye-ARM eminingi, kufaka phakathi i-smartphone yeLibrem 5 yesikhathi esizayo.
Inguqulo entsha yemvelo yedeskithophu ye-GNOME iletha izici ezintsha nokuthuthuka ezingxenyeni zayo eziningi ezisetshenziswayo.
INautilus nayo isekugxileni kodaba futhi izobe ithola ukuthuthuka okubalulekile. INautilus ingenye yezinto ezibaluleke kakhulu ze-GNOME, ngoba iNautilus ivumela abasebenzisi ukuphatha amafayela namafolda wohlelo lwabo lokusebenza.
Isithembiso ukuthi kuzoba nokuthuthuka ekusebenzeni kweFlatpak. Ngakho-ke enguqulweni elandelayo yeGnome 3.30 izofika nokuthuthuka eNautilus.
1 Yini okusha in Nautilus
1.1 Izici ezintsha ze-Nautilus
2 Mayelana nenguqulo ye-beta yeGnome 3.30
Yini okusha in Nautilus
Okokuqala, umphathi wefayela weNautilus uzobe ethola izici ezintsha nezithuthukisi ezisanda kuvezwa njengengxenye ye-beta ye-Gnome 3.30.
Imenenja yefayela leNautilus nayo uzobe uthola isipiliyoni esingcono kakhulu seFlatpak yabasebenzisi nonjiniyela.
Futhi kuhlelwe ukufaka injini yokusesha kwimenenja yamafayela ukuthola amafayela akamuvaNgaphezu kokufaka ukuxhaswa kokususa umkhombandlela wedeskithophu.
Esinye isici esisha esihleliwe ukuchofoza kwegundane kwesokudla kwizikhulisi nokusingathwa okungcono kwamafayela amabi kwimenenja yefayela yeNautilus.
Ngaphezu kwalokho, ithimba lezentuthuko lilungiselela ukuthuthela eNautilus kubuchwepheshe besikhathi esizayo be-GTK + 4.
Izici ezintsha ze-Nautilus
IGnome 3.30 izofika nokuthuthuka eNautilus futhi lapho kungaqokonyiswa khona ukuthi kuzobandakanya:
Ukusekelwa kwamamenyu wokuthinta ezindaweni zokubuka
Ukusekelwa kokuboniswa kokucaca okuphansi.
Ikholomu entsha »Bonisa ukuvakashelwa kwakamuva» izofakwa esikrinini sakamuva.
Izenzo zokusekela kubha yekheli.
Kuzofakwa nedizayini entsha
Ibha yamathuluzi yokuklama imenyu entsha.
Okufakiwe futhi yikhono lokukhombisa windows esebenzayo kudeshibhodi Ubuntu.
Ukubukwa okusha okuthuthukisiwe.
Shayela amagama amaningi wefayela ukuqamba kabusha,
Bala amafayela nama-mislabels ngenkathi kwenziwa ukusebenza.
Imininingwane engaphezulu ebhokisini lengxoxo Yezakhiwo.
Ibonisa isenzo esithi "Vula nge" kumafayela atholakala emgqonyeni wokusebenzisa kabusha.
Isaziso kubasebenzisi lapho ifayela elifihliwe liqanjwa kabusha ngemuva kwalesi senzo.
Ithuthukisa ukufinyelela kwefayela ngosesho lweNautilus.
Isakhiwo esivundlile ekubukeni kwesithonjana;
Kusiza ukuvulwa kokusetshenziswa kwama-disks e-GNOME ngenkinobho entsha yengxoxo.
Ivumela abasebenzisi ukuvula izihlungi zokusesha ngokuvula 'okuthe xaxa' ukusebenzisa i-Ctrl + F.
Mayelana nenguqulo ye-beta yeGnome 3.30
Le nguqulo entsha ye-beta yeGnome 3.30 isanda kukhishwa kuleli sonto kumaseva wokulanda iphrojekthi wabahloli bokuqala kanye nabahloli be-beta.
Ngokusemthethweni, inguqulo ye-beta ye-GNOME 3.30 izokhishelwa abasebenzisi abajwayelekile ngo-Agasti 1, okungukuthi ngoLwesithathu. Ngokufanayo, i-beta yesibili ihlelelwe u-Agasti 15 futhi ekugcineni inguqulo entsha ye-GNOME 3.30 izokhishwa ngokuphelele ngoSepthemba 5.
Yize okwamanje kuyizinsuku ezimisiwe futhi zilandelwe unyawo, siyethemba ukuthi ukukhishwa kuzoba usuku oluthenjisiwe nokuthi kwenzeka okuthile obekungalindelekile kungenzeki okulibazisa.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » Uhlobo olulandelayo lweGnome 3.30 luzofika nokuthuthuka eNautilus
Faka i-openSUSE ARM ku-Raspberry pi 3 imodeli B
Izicelo ezibalulekile nezibalulekile ze-GNU / Linux 2018/2019